ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း | ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
Published: Mon, 04/18/2022 - 14:24 Posted Under: မြန်မာ့မီးရထား Place: နေပြည်တော်
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ရက်
၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဌာန၊ (စက်မှု/သွားလာဌာနခွဲ)တွင် လစ်လပ်လျှက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ်(၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) တန်း စက်ခေါင်းမောင်း(၅)ဆီလောင်း (၁၆၀)နေရာအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူသည်-
(ခ) (၁.၄.၂၀၂၂)နေ့တွင်အသက်(၃၀)နှစ် (ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက(၃၅နှစ်)ထက်မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်။
(ဃ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အမြင်အာရုံကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ မျက်မှန်/မျက်ကပ်မှန် တပ်ဆင်ထားသူများမဖြစ်စေရ။အရောင်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သူများဖြစ်ရမည်။(Colour Blind မဖြစ်စေရ)
(င) နေရာဒေသမရွေး သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
၂။ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်သာ လျှောက်ထားရမည်။ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံကို
မြန်မာ့မီးရထား Website ဖြစ်သော www.myanmarailways.gov.mm ၏ homepage တွင်download ရယူ၍လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့မီးရထား(ရုံးချုပ်)၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(စက်မှု/သွားလာဌာနခွဲ၊) နေပြည်တော်ဘူတာကြီး၊ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးအပေါ်ထပ်ရှိ အင်ဂျင်နီယာမှူး(စက်မှု/တိုင်း)တိုင်းအမှတ်(၇) ရန်ကုန်ရုံး၊ မန္တလေးဘူတာကြီးအပေါ်ထပ်ရှိ အင်ဂျင်နီယာမှူး(စက်မှု/တိုင်း)တိုင်းအမှတ်(၃)မန္တလေးရုံးတို့တွင် လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။
၃။ လျှောက်ထားသူများသည် သတ်မှတ်လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
(ခ) လွန်ခဲ့သော(၁)လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ
(ဃ) နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(အမြဲတမ်း)မဟုတ်သူများအတွက် သက်တမ်းရှိ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် ကဒ်ပြား(မိတ္တူ)
(င) ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်းထောက်ခံချက်(မူရင်း)
၄။ လျှောက်လွှာများကို မြန်မာ့မီးရထား၊ စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေ မန်နေဂျာ(စက်မှု/သွားလာ)ဌာနခွဲ၊ နေပြည်တော်ဘူတာကြီးထံလိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင်(သို့မဟုတ်) စာတိုက်မှမှတ်ပုံတင်၍ (၆.၅.၂၀၂၂)နေ့အရောက် ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။ ရန်ကုန်ဘူတာကြီး အပေါ်ထပ်ရှိ အင်ဂျင်နီယာမှူး(စက်မှု/တိုင်း)တိုင်းအမှတ်(၇)ရန်ကုန်ရုံး၊ မန္တလေးဘူတာကြီး အပေါ် ထပ်ရှိ အင်ဂျင်နီယာမှူး(စက်မှု/တိုင်း) တိုင်းအမှတ်(၃)မန္တလေးရုံးတို့တွင်လည်း (၆.၅.၂၀၂၂)နေ့ အရောက် ကိုယ်တိုင်ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်သည်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(အမြဲတမ်း)ဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲမှတစ်ဆင့် ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။ ကြိုတင်လျှောက်လွှာတစ်စောင်ကို ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံနှင့်အတူ ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ထက်ကျော်လွန် ပေးပို့ လာသောလျှောက်လွှာများနှင့် အချက်အလက်မပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာများကို လက်ခံထည့်သွင်း စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၅။ ရေးဖြေစာမေးပွဲကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်တို့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်-
နေ့ရက် ဘာသာ အချိန်
(က) ၁၉ . ၅ .၂၀၂၂ မြန်မာစာ နံနက်(၀၉:၀၀)မှ (၁၁:၀၀)နာရီအထိ
(ခ) ၁၉ . ၅ .၂၀၂၂ အင်္ဂလိပ်စာ နံနက်(၁၂:၀၀)မှ (၁၄:၀၀)နာရီအထိ
(ဂ) ၁၉ . ၅ .၂၀၂၂ အထွေထွေဗဟုသုတ နံနက်(၁၅:၀၀)မှ (၁၇:၀၀)နာရီအထိ
၆။ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြားများကို (၁၇.၅.၂၀၂၂)နေ့မှ (၁၈.၅.၂၀၂၂)ရက်နေ့အထိ ရုံးချိန်အတွင်း ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်လက်မှတ် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကဒ်(မူရင်း)တို့ကိုပြသ၍ ရန်ကုန်စာစစ်ဌာနအတွက်၊ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးအပေါ်ထပ်ရှိ အင်ဂျင်နီယာမှူး(စက်မှု/တိုင်း)တိုင်းအမှတ်(၇)ရန်ကုန်ရုံး၊ မန္တလေးစာစစ်ဌာနအတွက် မန္တလေးဘူတာကြီး အပေါ်ထပ်ရှိ အင်ဂျင်နီယာမှူး(စက်မှု/တိုင်း)တိုင်းအမှတ်(၃)မန္တလေးရုံးနှင့် နေပြည်တော်စာစစ်ဌာနအတွက် စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(စက်မှု/သွားလာ)ဌာနခွဲ၊ နေပြည်တော် ဘူတာကြီးတို့တွင် ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကဒ်ပြားထုတ်ပေးချိန်တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် နေရာကို ကြော်ငြာထားပါမည်။
၇။ ရေးဖြေအောင်မြင်ပါက လူတွေ့စစ်ဆေးမှုဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်း၊ ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့် လူတွေ့ဖြေဆိုရမည့်စာရင်း၊ လူတွေ့ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်၊ နေရာအချိန်နှင့် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းတို့အား မြန်မာ့မီးရထား၊ စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(စက်မှု/သွားလာ)ဌာနခွဲ၊ နေပြည်တော်ဘူတာကြီးတွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ မီးရထား Website တွင်လည်းကောင်း ကြော်ငြာပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ရွေးချယ်ခံရပါက ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးသင်တန်းကျောင်း၊ မိတ္ထီလာတွင် သင်တန်းကာလ (၁၂)ပတ် တက်ရောက်ရမည်။
၉။ မြန်မာ့မီးရထားတွင် အနည်းဆုံး(၁၀)နှစ်တစ်ဆက်တည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
၁၀။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား(ရုံးချုပ်) ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(စက်မှု/သွားလာ)ရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်း-၀၆၇-၇၇၁၁၄၊ ၇၇၀၄၁ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Training (Ass-2)(Newspaper) (New)_0.doc (55.5 KB)